Ukhuseleko -I-AOOD Technology limited
Imisesane yeziqwenga zomkhosi
Aerospace zomkhosi zelanga Imisesane
Imisesane yeCapsule Slip
Imisesane yesiliphu seRadar
Amalungu ajikelezayo ajikelezayo ajikelezayo
Amalungu ajikelezayo e-Coaxial Rotary
Amalungu e Rotary Rotary
Amalungu eFiber Optic Rotary
Ifayibha Optic Hybrid zelanga Imisesane
Amakhonkco ezinto zasemanzini
Imisesane yeSlip yoShishino
Ngokusebenzisa Imisesane yeSlip Bore
I-Servo-system Slip Imisesane
Isantya esiphakamileyo esincinci seRip
Inkcazo ePhakamileyo yeSlip Rings
Imisesane yokutyibilika kwe-Ethernet
Imisesane yePancake Slip
Imisesane yokutyibilika eyahlukileyo
Isantya esiphakamileyo Imisesane
Amaqondo obushushu aphezulu Slip
Amakhonkco amakhulu eSlip Bore
Imisesane yeZilayidi eziHlangeneyo zeGesi
Imisesane yesiqhelo seSlip
Ulwakhiwo kunye nezoLimo
Iinkqubo zokhuselo zale mihla ziyakhula zifunwa kwizicelo zorhwebo, ezomkhosi kunye nezomkhosi ezinje ngokhuseleko kunye neziseko zophuhliso, ukhuseleko kwezothutho kunye nombono wasebusuku, ukuhamba ngesikhephe ukuzonwabisa, ukubekwa imililo emlilweni, ukubekwa kweliso emkhosini kunye nokufumana umkhondo. Ukufezekisa ukubekwa kweliso kunye nokufumana ekujolise kuko kunye nenjongo yokulandela umkhondo, inkqubo yevidiyo ehambelana nayo iyafuneka yakhiwe ukuvelisa imifanekiso okanye ukurekhodwa. Kwintliziyo yezi nkqubo zevidiyo zintsonkothileyo, onke amandla, umqondiso kunye nedatha zidluliswa ngenkqubo yesilayidi. Inika i-360 ° ukuhanjiswa okungapheliyo kwemifanekiso emikhulu okanye ukurekhoda ukusuka kwinxalenye ejikelezayo ukuya kwindawo esisigxina kunye nokuthintela iingcingo ezijijekileyo ngelixa zijikeleza. Kungenxa yoko le modem yevidiyo sesona sicelo sikhulu semfuno yamasongo esiliphu.
Iimveliso ezinxulumene noko: Imisesane yeCapsule Slip, Inkcazo ePhakamileyo yeSlip Rings, Imisesane yokutyibilika kwe-Ethernet
Ifowuni: +86 755 29527430
■ Amandla eR & D anamandla
■ Umgangatho onokuthenjwa nongaguquguqukiyo
■ Ukuhanjiswa okukhawulezayo
■ Inkonzo ethembekileyo emva kokuthengisa
Umgangatho ophezulu kunye neNdleko esebenzayo yeRIP Slip Rings
Uyilo lwe-AOOD kunye nokuveliswa komgangatho ophezulu kunye neendleko ezisebenzayo zeeringi zokutyibilika kwamashumi eminyaka. Sihlala siphucula amakhonkco ethu okumgangatho ophakamileyo we-ROV kwaye siphuhlisa iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezifunwayo. Izisombululo zethu zeringi ye-ROV zibandakanya amakhonkco ezityibilikisi zombane, ii-FORJs, amalunga ajikelezayo ajikelezayo / ukujikajika okanye indibaniselwano yombane, i-optical kunye nolwelo. & nbs ...
Izinto ezintlanu eziPhambili ezichaphazela iSlip Ring yokuSebenza ixesha lokuPhila
Iringi yesiliphu lilungu elijikelezayo elalisetyenziselwa ukunikezela ngoqhakamshelwano lombane ukusuka kwindawo emileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, linokuphucula ukusebenza ngoomatshini, ukwenza lula ukusebenza kwenkqubo kunye nokuphelisa iingcingo ezonakalisayo ezijingayo kumalungu ahambisekayo. Imisesane yesiliphu isetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo zekhamera eriyeli yeselfowuni, iingalo zerobhothi, abaqhubi-semi, abajikelezayo ithebhu ...
Izicelo ezibanzi zeCompact Capsule Slip Rings
Yintoni iringi yesiliphu? Iringi yesiliphu sisixhobo se-elektroniki esivumela ukujikeleza okungasikelwanga mda kuma-360 ngelixa uhambisa amandla, uphawu, idatha okanye imithombo yeendaba ukusuka kwiqonga elimileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, yinto edibeneyo yokujikeleza ngokudibeneyo okanye umbane wombane kwiinkqubo ezininzi zolawulo lokuhamba. Amakhonkco esityibilikisi esixineneyo ahlala enefla ...